Sida laga soo xigtay Kommersant, shirkadda Mareykanka ee Mondelez, oo soo saarta qalabka loo yaqaan 'Estrella chips', ayaa ka fiirsaneysa suurtagalnimada in la abuuro qandaraas wax soo saar oo alaabteeda ah goobta saddexaad ee Xiriirka Ruushka. Sida laga soo xigtay khabiirada, Mondelez wuxuu adeegsan karaa awooda Russky Product (wuxuu soosaaraa jajabka ka hooseeya sumadda Moscow Potato) iyo Aqualife (waxsoosaarka cabitaanada Chernogolovka, Fry's, Hoot chips, iwm).
Xusuusnow in illaa dhammaadka 2018, chikkirada Estrella loo geeyay Ruushka warshad Yukreeniyaan ah oo ku taal Vyshgorod. Laakiin markaa alaabooyinkan ayaa lagu soo daray liiska badeecadaha laga mamnuucay soo dejinta Ukraine.
Tags: processing baradhochips wax soo saarka